ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - တရုတ်ရွှေတံခါးနည်းပညာ Co. , Ltd
Bio-ဘေးကင်းလုံခြုံမှု Pass ကိုထောင့်ကွက်
VHP Pass ကိုထောင့်ကွက်
မှန် CT အခန်းတံခါးပေါက်
ပေ & CT တံခါးပေါက်
MRI Windows ကို
Glass ကို Windows အတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြ
, CA တံခါးပေါက်
PU Panel ကိုစာနယ်ဇင်းစက်
ခဲ Sheet များ
Gonad Shield ကို
သိုင်းရွိုက် Shield ကို
ခါးစညျးရှေ့ဖုံး Holder ဦးဆောင်လမ်းပြ
ရွှေတံခါးနည်းပညာကျနော်တို့အဘို့တံခါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနီးပါးဆယ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည် 2009 ခုနှစ်ကတည်းကဆေးဝါး, ဆေးရုံ, နျူကလီးယားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အအေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှတံခါးကိုဖြေရှင်းချက်ပေးအထူးပြုထားပါတယ် Ningbo, တောင်အရှေ့တရုတ်အတွက်လှပသောဆိပ်ကမ်းမြို့, တည်ရှိသော ဆေးဝါးများ, ခားဓါတ်ခွဲခန်း, စစ်ဆင်ရေးခန်း, X-ray ခန်း, မှန် CT ခန်း, PET / CT ခန်း, MRI ခန်း, သန့်ရှင်းသောအခန်းများ, အအေးခန်းနှင့်နျူကလီးယား applications များ။
ပရောဂျက်စတင်ခင်မှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသော applications များနှုန်းအဖြစ်သင့်လျော်သောတံခါးများရွေးချယ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ငါတို့တံခါး install လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးများအဘို့အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်ဘဝတစျခုလုံးကိုပေး။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင်ငါတို့တံခါးထောင်ပေါင်းများစွာ၏လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများတွင် installed ပြီသူတို့ကောင်းစွာစျေးကွက်ကလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့သြစတြေးလျား, အလယျပိုငျးအာဖရိက, တောင်အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အာရှတွင်ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရှိသည်။ ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများမှကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရှည်လျားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
ရွှေတံခါးတံခါးများကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းတန်ဖိုးတစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပြောသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းပစ္စယ source သာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျနော်တို့ ပို. ပို. အချဉ်အတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်ပိုပြီးအဖိုးတန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကူညီပေးသည်။
မိုဘိုင်း & Whatsapp: 86-15990207615
အမှတ် 777 Rili အလယျပိုငျးလမ်းမကြီး Yinzhou Ningbo တရုတ်